के हो ‘ब्रेन कम्प्युटर इन्टरफेस’ ? मानव मस्तिष्कमा किन चिप लगाउन चाहन्छन विश्वकै धनी मस्क ? « Bizkhabar Online
के हो ‘ब्रेन कम्प्युटर इन्टरफेस’ ? मानव मस्तिष्कमा किन चिप लगाउन चाहन्छन विश्वकै धनी मस्क ?
23 January, 2022 9:09 am
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलोन मस्कको मस्तिष्क चिप बनाउने स्टार्टअप न्यूरालिंकले चाँडै नै यसको मानव परीक्षण सुरु गर्ने तयारी गर्दैछ । मस्कले यो चिपको मद्दतले पक्षाघातबाट पीडित व्यक्तिले आफ्नो औंलाभन्दा छिटो मस्तिष्कले स्मार्टफोन चलाउन सक्ने वाचा गरेका छन् । मस्कले सन २०१६ मा यो स्टार्टअपको सह–स्थापना गरेका हुन् । यो चिप पेजर नामको बाँदर र सुँगुरमा जडान गरिसकिएको छ र यसले काम पनि गरिरहेको छ ।
यो स्टार्टअपले अब प्रत्यक्ष क्लिनिकल ट्रायल डाइरेक्र भर्ती गर्दैछ ताकि यो प्रविधि मानवहरूमा प्रयोग गर्न सकियोस । ‘क्लिनिकल ट्रायलको निर्देशकको रूपमा, तपाईंले सबैभन्दा प्रतिभाशाली डाक्टरहरू, शीर्ष इन्जिनियरहरू, र न्यूरालिंकको पहिलो क्लिनिकल परीक्षणमा संलग्न मानिसहरूसँग काम गर्नुपर्नेछ,’ विज्ञापनमा उल्लेख छ । निर्देशकले फ्रेमन्ट, क्यालिफोर्नियामा काम गर्नुपर्नेछ ।
एलोन मस्क विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् र एक अनुमान अनुसार उनीसँग २५६ अर्ब डलरको सम्पत्ति छ । गत महिना मस्कले यो प्रविधिको सहयोगले रोगका कारण हिड्न नसक्ने मानिस फेरि हिँड्न सक्ने आशा व्यक्त गरेका थिए । मस्कले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा मानव मस्तिष्कमा कम्प्युटर चिप जडान गर्ने योजना सुरु गरिने पनि घोषणा गरेका छन् । मस्कले सबै कुरा ठीक भएमा न्यूरालिङ्कको नामबाट सुरु भएको ब्रेन कम्प्युटर इन्टरफेसको मानव परीक्षण यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा सुरु गरिने बताए ।
मस्कले सन् २०१६ मा सान फ्रान्सिस्को खाडी क्षेत्रमा यो स्टार्टअप सुरु गरेका थिए । यसले अल्जाइमर्स, डिमेन्सिया र स्पाइनल कर्डमा चोटपटक जस्ता न्यूरोलोजिकल समस्याहरूको उपचार गर्न मद्दत गर्न मानव मस्तिष्कमा कम्प्युटर इन्टरफेस प्रत्यारोपण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस परियोजनाको साथ मस्कको दीर्घकालीन लक्ष्य मानव र कृत्रिम बुद्धिमत्ता बीचको सम्बन्ध अन्वेषण गर्नु हो ।
वर्षको अन्त्यसम्ममा मानव परीक्षण सुरु गर्ने तयारी
मस्कले लेखका छन् कि न्युरालिङ्कले प्रत्यारोपण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नको लागि पर्याप्त गति बढाउन धेरै गाह्रो काम गरिरहेको छ । उनी अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) सँग पनि सम्पर्कमा छन् ।
‘यदि चीजहरू ठीक भएमा, हामी यो वर्षको रूपमा मानव परीक्षण गर्न सक्षम हुन सक्छौं’, मस्कले निजी सामाजिक एप क्लबहाउसमा एक अन्तर्वार्ताका क्रममा न्युरालिङ्कले बाँदरको मस्तिष्कमा वायरलेस प्रत्यारोपण गरेको खुलासा गरेका थिए । त्यसपछि उनले मस्तिष्कको सहयोगमा भिडियो गेम खेले । यसअघि न्यूरालिङ्कले सुँगुरको मस्तिष्कमा यी चिप्स राखेर परीक्षण पनि गरिरहेको छ ।